कहिले टुंग्याउला कांग्रेसले २० जिल्लाकाे क्रियाशील सदस्यता विवाद ? « Rara Pati
कहिले टुंग्याउला कांग्रेसले २० जिल्लाकाे क्रियाशील सदस्यता विवाद ?
भदौ, २२ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेका थप ५ जिल्लामा आज (मंगलबार) वडा अधिवेशन हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर विवरण दिएका ५७ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा आज वडा अधिवेशन हुने भएको हो । आज वडा अधिवेशन हुने जिल्लाहरूमा गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, कालीकोट र दार्चुला रहेका छन् ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेका ५७ मध्ये ४८ जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराको सदस्यता विवाद टुंगिएर निर्वाचन अधिकृतले आज छलफल राखेको बताए । ‘डडेलधुरामा आज छलफल पछि वडा अधिवेशनको मिति तय गरिने छ,’ यादवले भने, ‘रुकुम पश्चिम र पूर्व दुबै जिल्लाको वडा अधिवेशन भोलि सुरु हुन्छ ।’
क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक भएको दुई घण्टाभित्र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाउन सकिने गरी तयारी भएको यादवले बताए । कांग्रेसले ७५३ वटै स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ २७ गते गर्ने निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअघिसम्म ७७ वटै जिल्लाका सबै वडाको अधिवेशन सक्ने गरी काम गर्न निर्वाचन समितिले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
करिब ९ लाखको सङ्ख्यामा रहेका कांग्रेस क्रियाशील सदस्य पार्टीको गाउँ/नगर वडा अधिवेशनका मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यले आफ्नो वडाको वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । मुलुकभरका सबै ६ हजार ७४३ वडामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा ४७ हजार २०१ पदाधिकारी र सदस्य एक लाख २१ हजार ६८१ निर्वाचित हुने समितिका संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
यसबाहेक मनोनित हुनेको सङ्ख्या थप रहेको छ । त्यस्तै देशभरका वडाबाट एक लाख १४ हजार ५७५ क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी १ असोज र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन ५ असोजमा तोकिएको छ । यसैगरी कांग्रेसले एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन १० असोज, प्रदेश अधिवेशन १०–१२ कार्तिक र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी ९–१३ मङ्सिरसम्म तय गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाको सदस्यता सूची सार्वजनिक भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाको सूची सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र कैलालीको पनि विवाद टुंगिएको छैन । -न्युज कारखाना